32oz 1000ml ingilazi makhi isitoreji ukuwafaka imbiza ngesiliva isikulufa sensimbi lid
Le mbiza yengilazi engu-1000ml 32oz imbiza enkulu, elungele ukusetshenziswa kosayizi womndeni. Imbiza ngayinye yengilazi yenziwe ngengilazi esezingeni eliphakeme esezingeni eliphakeme futhi ifinyelele emazingeni aphakeme kakhulu. Futhi ukwakheka kwayo kuhlose ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwentamo ebanzi nomzimba omude. I-cap engu-86mm iyahambisana nembiza futhi ikunikeza uchungechunge lwezinzuzo, kufaka phakathi i-plastisol camera noma i-PE liner. Isivalo sinemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi omnyama, igolide, isiliva nokunye. Akunandaba ukuthi yini izidingo zakho, ungaqiniseka ukuthi okuqukethwe kwakho kuphephile, kuvikelwe futhi kukhonjiswe ngendlela eyiyo.
16oz 500ml umlomo umlomo ingilazi mason jar nge anemibala plastic lid
I-16oz 500ml Sula i-Glass Food Jar ne-Plastic screw lid imbiza ebanzi, ephephile ekudleni enhle kakhulu yokubamba u-pickle, amasoso kanye nokugcina okuningi. Isimo esiyindilinga sinikeza indawo enhle yokwengeza amalebula noma okunye ukufaka umkhiqizo komkhiqizo. Le mbiza iza nesembozo sokuskrola esingu-86mm- sikulungele ukunikela ngokugcinwa okuphephile kokuqukethwe kukabhodo wakho.
4oz 120ml Hexagonal Sula Glass Jar ngegolide lid lid
Le mbiza yengilazi engu-4oz iyimbiza ejamu emaphakathi, elungele kakhulu ukuthengiswa emakethe enkulu. Umumo oyingqayizivele kulula ukuwubamba ngesandla futhi wenziwe ngengilazi esekhwalithi ephezulu ebonakalayo. Ilungele ukubonisa nokugcina ijeli lakho elenziwe ekhaya, ujamu wezithelo, i-chutney obukhulu noju olumnandi.
1.5oz 45ml Mini Hexagonal Sula Glass Jar for Honey, Jam, Umhlobiso
Le ngqayi yengilazi engu-6ml enamacala ayisithupha enesembozo iyingxenye yochungechunge lwethu lwembiza enamacala ayisithupha, uma ufuna ukuhlinzeka ngemikhiqizo ngosayizi abahlukahlukene, kufanele ucabangele lokhu. Leli bhodlela lomlomo omkhulu elingu-45 ml lenziwe ngengilazi esezingeni eliphakeme esezingeni eliphezulu, elifanele ukubonisa kahle nokugcina ujeli wakho owenziwe ekhaya, ujamu wezithelo, i-chunky chutney noju olumnandi.
Ukuhluma Isithombo Sokuhlwanyela Imbewu Ye-Jar Kit Kufaka Umlomo Womlomo Womlomo Omkhulu, 304 Insimbi Engagqwali Mesh Lid, Umkhono We-Neoprene ne-Plastic Drip Tray Yokwenza Imbewu Ihlume
Le kit iqukethe konke okudingayo ukuze uqalise. Inembiza yengilazi emile engakusiza ukutshala izinhlobo eziningi zembewu ngaphandle kwezinkinga. Ithreyi yokuconsa. Manje awusayibeki imbiza endaweni emnyama. Sinikeza umkhono wokuvikela ukukhanya ongalingisa ubumnyama, ngakho-ke ungakwazi Ukulawula imvelo lapho imbiza ingabekwa khona ngokubeka umkhono embizeni. Lokhu kusiza ukuqhuma, kunciphisa isikhathi sokuhluma, kuveza amahlumela amade, futhi kungenza kusebenze izingulube zezitshalo, ngaleyo ndlela kusize imbewu ethile ukuthi ihlume.
Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Glass Bottle Nge Spray Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo,